Kubvunzana naMarwan | Zvazvino Zvinyorwa
Carmen Guillen | | Hurukuro, Vanyori, Literature, Nhetembo
En Zvazvino Zvinyorwa Isu takave nemufaro mukuru wekugona kuita izvi hurukuro naMarwan, anga ane hushamwari uye akavhurika nguva dzese kubva zvatakabata naye. Mangwana bhuku rake idzva riri kutengeswa "Ramangwana rangu rose rinewe" kubva kuPlaneta imba yekutsikisa, uye zita rayo ratovimbisa kare ... Tinokusiya nemhinduro dzako kumibvunzo yedu.
Mabhuku Nhau: Tinoziva zita rako, Marwan; isu tinoziva kuti akazvipira kumimhanzi nekunyora, saka tinogona kutaura mune zvakajairika kuti iye muimbi, asi Marwan anozvitsanangura sei?
Marwan: Kuzvitsanangudza hazvigoneke nekuti vanhu vane maficha mazhinji, asi hei, dudziro yangu ndeiyi: Ndinoedza kuve munhu kwaye.
KU: Isu tinoziva kuti kusvika parizvino akaburitsa mabhuku maviri, "Nyaya inosuruvarisa nezve muviri wako pamusoro wangu" muna 2011 uye "Mazwi enguva yangu munguva yechando" muna 2014. Mangwana rake idzva bhuku "Ramangwana rangu rese rinewe." Chii chatinogona kuwana chakasiyana mubhuku rino tichienzanisa neakapfuura maviri?
MW: Chinhu chekutanga ndechekuti ini ndinofunga kuti pese pandinonyora zvirinani. Ndiri newbie wekunyora mabhuku uye zvekare zvakanyanyisa kupusa kupfuura ino. Ehe, iri zvakare yakajeka visceral uye iyo ine yayo yakanaka zvikamu. Mubhuku rino randinoburitsa izvozvi ndakachengeta mutinhimira, kupatsanurwa kwemavhesi, ndinonyora pamusoro penyaya dzakasiyana siyana, pane rudo rwakawanda uye nhetembo dzinopwanya moyo senge mune yekutanga asi zvakare kune nhetembo zhinji dzemagariro. , ichiwedzera kuratidzwa, ibhuku rakareba kwazvo uye parinenge riine ma aphorisms mazhinji kana nhetembo-diki, chimwe chinhu icho mubhuku rapfuura chaisatombove nacho.
KU: Marii yaunoshandisa kunyora nekunyora muhupenyu hwako hwezuva nezuva kana usiri parwendo? Iwe une here yakasarudzika tsika kana zvekuvaraidza zvaunofanira kuita usati wasvika pasi kwazviri?
MW: Zvinoenderana. dzimwe nguva zuva rese uye dzimwe nguva hapana muvhiki. Ehe, kana ndichipfeka ndinopfeka. Ini ndinofunga chinhu chakanyanya kunaka kuseta misi yekutarisa uye pandinotarisa handirege kunyora. Handina tsika dzemhando ipi neipi, ndinogona kunyora chero kupi uye chero nguva. Iwo mavhesi anouya kana iwe ukaatsvaga asi iwo anouyawo chero nguva uye mamiriro.
KU: Dai iwe wakapihwa sarudzo pakati pekuenderera uchinyora nekuimba kana kuenderera uchinyorera kutsikisa mabhuku, Marwan angasarudzei?
MW: Nyora woimba. Ini ndinofunga iwo mutauro wepamusoro. Asi huya, izvo hazvimbofi zvakaitika, saka ini ndicharamba ndichiita zvese, nekuti zvese zvinhu zvinondifadza.
KU: Ndinofunga vakambokurondedzera kana kukufananidza pane imwe nguva pabasa rako naIsmael Serrano kana Jorge Drexler, sezvo vari vese vanyori-vanyori vanyori uye vanonyora nezverudo nekusuwa kwemoyo… Unofungei nezvavo? Wakavatevera here pane imwe nguva muhupenyu hwako kana vakambokumaka mumhanzi paunenge uchinyora?
MW: Vaviri vakandimaka zvakanyanya munzira yangu yekunyora. Ini ndoteerera vese vari vaviri kweanopfuura makore gumi nemashanu uye ini ndiri feni yakazara yevaviri, yenzira yavo yekuverenga nekuimba. Kwandiri iwo maviri eangu makuru mareferenzi, agara ari
KU: Isu tinoenderera kumumhanzi wako, ndedzipi maguta iwe aunoshanyira munguva pfupi? Uye ndeupi wauri kuda kuimba asi usati wagona kuimba zvakadaro?
MW: Izvozvi ndiri kuenda kuSantiago de Compostela uyezve mini-yekushanya kuMexico iyo yataderedza kuti tikwanise kudzokera kuMadrid book fair, asi ini ndichadzoka munaNovember. Muna Chikumi ini ndichave ndiri muZaragoza, Murcia uye Cartagena uye muna Chikunguru ndichaita konzati yakakosha yekushanya. Ichave iri muMadrid, muLos Veranos de la Villa kutenderera kuCirco Mutengo. Ndinokoka munhu wese, zvisinei neguta, kuti auye, nekuti chichava chiratidziro, ndezvechokwadi.
KU: Iwe une chero chakakosha rudo kune chaiyo rwiyo kana nhetembo yako? Uye nekuti?
MW: Kune nziyo kune vakawanda: Ngirozi, "Kubva warara padhuze neni", "Rwiyo kuna baba vangu",… Ndinofarira nziyo dzangu dzese asi pane dzimwe dzinondifambisa zvakanyanya uye ndidzo dzimwe dzadzo. Uye yenhetembo dzangu ndinoda itsva inonzi "Compañeras", kumwe kufona "Izwi rokuti Maria", "Tanga kuzvitsanangura"; "Makondinendi", etc ...
KU: Ndeupi munyori kana vanyori iwe wausingagone kurega kutevera uye uine rimwe nerimwe remabhuku avo? Kana isiri iyo chaiyo, ibhuku ripi raunaro seunofarira?
MW: Kune akawanda. Ndine shungu naJuan José Millás, ndakaverenga akawanda emabhuku ake. Zvakare Quim Monzó, Alssandro Baricco, Benjamín Prado, Luis García Montero, Karmelo C. Iribarren, Murakami, Bukowski,… Ndakaverenga mabhuku mazhinji nemumwe wevanyori ava. Bhuku rangu randinodisisa ndinofunga kuti "Rusununguko" naJonathan Franzen, kunyangwe «Ocean Sea» Ini ndaidawo Baricco futi.
KU: Chekupedzisira, Marwan, nzvimbo yekudonha murudo, nzvimbo yekuzvirasisa uri wega uye imwe yekutsvaga nezve runako rwayo.
MW: Kudanana, chero nzvimbo yakanaka. Asi kana iwe ukandibvunza nezve nzvimbo inoita kuti ndidanane, ndinofunga mhinduro ndeye Formentera. Nzvimbo yakanyanya kurasika ndeyeMadrid uye nekuda kwerunako rwayo chinhu chinoshamisira chandakaona igirazi rePerito Moreno muArgentina.
Ndatenda zvikuru Marwan nezwi rimwe nerimwe remashoko ako aratidzwa pano uye kubva Zvazvino Zvinyorwa Tinokushuvira rombo rakanaka pane zvese zvaunoita.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Literature » Hurukuro » Kubvunzana naMarwan
Ndiani ari mufirimu 'Kuzviuraya Chikamu'
Nyika dzeValken. Makungwa pamoto